Maria Frisa. Mibvunzo gumi yemunyori weNdichengete. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Nyaya
Mifananidzo kubva kuna María Frisa's Facebook nhoroondo.
Maria Frisa iri kuva iyo kutsikisa chiitiko yenguva yacho neruzivo rwake Ndichengete. Iye munyori akanyatsopindura izvi 10 mibvunzo nezve kuverenga kwako, vanyori vako, ako matsva mapurojekiti, zvinokurudzirwa nemunyori wako nemaonero ako pamusoro penzvimbo yekutsikisa. Kutenda kuzhinji kwenguva yako, Maria.
Ngatiyeukei kuti María Frisa, Akazvarwa muBarcelona asi kubva kuZaragoza nekutora, Iye ndiye munyori wenyaya uye zvinyorwa zvine madingindira nezve mamiriro ezvinhu evakadzi munharaunda yanhasi. Akatanga kutsikisa muna2000 uye zvakare anoshanda pamwe mumanyowani ezvinyorwa. Pakati pemazita ake pane Ipfupi runyorwa rwezvikanganiso zvangu zvakanyanya, 15 nzira dzekutaura rudo, Kufanana ipapo (yaive University of Zaragoza Narrative Prize) uye huwandu hwenyaya Kuzvimirira uye zvisingatarisirwi (Isabel de Portugal Mubairo). Iye zvakare ndiye munyori weakabudirira, uye zvakare ane nharo, vechidiki nhepfenyuro ine zita re Mazano makumi manomwe nemashanu ekupona muchikoro.
Rakadhindwa muna Kukadzi apfuura, iri basa razvino riri kuita bestseller uye vamwe vatsoropodzi vanoiona senge nyaya yehutsotsi yegore. Iyo ine nyeredzi nemutevedzeri weyakaongorora Bertha Guallar uye muongorori Lara samper, vanoshanda muZaragoza Women's Attention Service. Uku kupatsanurwa kweMapurisa eNyika anoona nezve kuferefeta nyaya dze mhosva dzepabonde uye mhirizhonga pakati pevakadzi.
Berta akaroora uye ane vana uye zvakare matambudziko kuyananisa basa uye hupenyu hwemhuri. Asi Anoda basa rake uye anozvipira muviri nemweya kubatsira vakadzi vanotambura mhirizhonga yakadai Lara chiremba wepfungwa. Akazvimiririra kwazvo uye anonzwisisa, aifanirwa kusangana nezvipingamupinyi zvakawanda uye maziso ekuona kuti akwiridzirwe sezvaari zvinoyevedza bella. Asi iye akagona kuve mutariri nekuda kwake njere uye kuzvipira nebasa rako.
Vaviri vanonzwisisa kuti vanotarisana nenyaya yakaoma kwazvo pamabasa avo apo Commissioner Millan, mukuru wavo, anovaratidza vhidhiyo mune iyo chitunha che a calcined mudiki. Icho chiri pamusoro Manuel Velasco, akaedzwa nekuda kwekubata chibharo Noelia Abad, wechidiki aive achidzoka kumba mushure memafaro. Velasco akaregererwa, saka zvinoita sekunge mumwe munhu akatora kururamisira noruoko rwake.
Asi kunze kwekunetseka uko kuferefeta kwese kuchasanganisira Berta achafanirwa kusangana nemushandirapamwe wokumurwisa painternet kune a nyaya yekushungurudzwa kwevana izvo hazvina kugadziriswa zvakanaka. Y Lara, ne chakavanzika chinotyisa Munguva yake yakapfuura, anoona kuti kana akazviratidza, anogona kupedza basa rake remapurisa.
Ini handirangariri yaive yekutanga, zvirokwazvo imwe yeunganidzwa Miniclassics de Maria Pascual.
Vakadzi vadiki de Louise anogona alcott. Ndinoyeuka hunhu hwe Jo kufora uye chishuwo chekuita saiye, apo kuve munyori chaive chinhu chakareba kwazvo.
Handina munyori wandinoda, Ndinonyanya kufunga uye zvandinoda zviri kuchinja. Dai ndaifanira kusarudza bhuku zvaizove zvechokwadi Makore zana okusurukirwa naGarcía Márquez kana tiine ruzivo.
Emma Bovary kana Anna Karenina.
Hapana chekuverenga, kunyangwe ini ndichifarira kuzviita akarara pasi. Kunyora ndinofanira kuve ne kunwa padyo padyo, kazhinji infusions. Kana ndavhara, chinonyanya kundibatsira ndeche Kutuhwina.
Nguva yangu yekuda kunyora ndeye mangwanani mangwanani, pandinosimuka, apo musoro wangu wakajeka. Yangu yandinofarira saiti ndeye un Vharanda muzuva.
Haikwanise kuratidza hapana kunyanya.
Iyo nhema mhando uye yepedyo. Nhau pfupi.
Ndiri kuverenga sapiens de Yuval noah harari y Ruoko rwekutanga rwakabata rwangu de Maggie O'Farrell. Ndiri kunyora a Ruzivo rwevadiki.
Ini ndinofunga parizvino ndiri kutsikisa mumuparidzi zvakaoma zvikuru kumunyori mutsva. Neraki pane chishandiso chinoshandiswa nevazhinji uye chinovatendera kuti vasvetukire pabepa uye ndizvo kuzvishambadza pamapuratifomu edhijitari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Maria Frisa. Mibvunzo gumi yemunyori weNdichengete.